ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ နည်းပညာ ၁၄ ခု – DigitalTimes
အသစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာတိုင်းဟာ အောင်မြင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာလောကမှာ မအောင်မြင်ဘဲနဲ့ ကျရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့နည်းပညာတွေ အများကြီး ရှိသလို တချို့တွေကျတော့ Marketing သဘောတရားကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ကြပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရင်း နဲ့ အရှုံးပေးသွားခဲ့ရတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာ က တချို့ နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာ ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် ကျိန်းသေအောင်မြင်နိုင်လောက်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ဖြစ်ပြီး တီထွင်သူတွေဟာ ခေတ်ရှေ့ပြေးလွန်းတာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့တာမျိုးလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
1 .Laser Disc
12 လက်မ ပတ်ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ Laser Discs ဟာ DVD နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါ။ 1978 ခုနှစ် မှာ Home Movie အတွက် Format ကို အပြင်မှာပြိုင်ခဲ့ရပေမယ့် 2000 ခုနှစ်မှာတော့ Sleepy Hollow ဟာ သူရဲ့ နောက်ဆုံး ခရီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းအား နည်းပါးတဲ့အပြင် အရည်အသွေးပိုင်း ပါ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် သူ အနားယူသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ သက်တမ်းဟာ ၂၂ နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ USB flash drive နဲ့တူပါတယ်။ စက္ကန့် ၉၀ သာသာနဲ့ Zipdrive ကို နေရာပြန်ချထားပေးဖို့လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအရေအတွက်နဲ့ သာမာန် capacity fizzled တွေဟာ နည်းပညာရဲ့ ပြင်ပကို ရောက်သွားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး HD DVD Player တွေကို US မှာ 2006 ခုနှစ်မှာ ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Pack တစ်ခုကို ဒေါ်လာ 600 နီးပါးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ 2008 နောက်ပိုင်းမှာတော့ Blu-ray နဲ့ Format တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး HD DVD Player ကို အသုံးပြုသူတွေက ထာဝရ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။
အသံထွက်ကောင်းမွန်ပြီး ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ်အကလို music player က ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ခဲ့သလို ပြည်သူတွေရဲ့လက်ခံမှုကို အဲ့ဒီ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကာလမှာ မရရှိခဲ့ပါဘူး။ Storage Space နည်းခြင်းနဲ့ Software ဈေးကြီးခြင်းတွေကြောင့် iPod တွေလောက် လူဖြူ၊ လူမည်းဂီတသမားတွေ အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့ ပိတ်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။
5. Swatch Internet Time
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ Swatch ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်တာနက် အချိန်အတွက် တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာက Beats တွေကို တိုင်းတာဖို့ အကောင်းဆုံးဒဖြစ်ပါတယ်။ Swatch လက်ပတ်နာရီဟာ ဝက်ကလေးကို ကုန်းပိုးထားရသလို သူ့ရဲ့ အသုံးမကျမှုတစ်ချို့ကြောင့် ခရီးမရောက်ခဲ့ပါဘူး။
PSP + iPad+ Kindle+iPod စတောတွေကို ပေါင်းစပ်ထားသလိုမျိုး အယူအဆတူပြီး မော်ဒန် ရှေ့ပြေး ထုတ်ကုန် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gizmondo မှာ ဂိမ်း၊ကင်မရာ၊မြူးဇစ်နဲ့ GPS အပြအင် Message တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ရှိသင့်တာထက် ပိုေဈေးကြီးလွန်းနေတာကြောင့် ရောင်းအားအညံ့ဆုံး အဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့ပါတယ်။
7. Palm Feleo
Motorola Atrix ဖုန်းနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ လက်တော့ပ်ကို တိုက်ရိုက်ကူးချထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ် Palm Foleo Notebook ဟာ စမတ်ဖုန်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့ မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ တထပ်ထဲတူနေအတွက်ကြောင့်ရော Palm ကို ထုတ်လုပ်ပြီး သုံးလအကြာမှာ ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက် ရပါတယ်။
Modern CSA-trends တွေနဲ့ Online Shopping တွေကို အခြေခံပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က dot-com Webvan ဟာ ယနေ့အချိန်မှာဆို အောင်မြင်မှုရမှာကြိမ်းသေပါပဲ။ ကံဆိုးချင်တော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ Online ဈေးရောင်းသူတွေဟာ ကုန်ဈေးနှုန်း အဆမအတန်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက် အရောင်းမသွက်တာမို့ အသုံးပြုမှု ရပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Flooz &Beans လို site ၉၀ ကျော် ပါရှိတာ ဆိုဒ်တွေဟာလည်း လုပ်ဆောင်မှုတူနေတဲ့အတွက် ဥပဒေ နဲ့ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခံရခြင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုသူတွေဟာ အကြွေးရော လက်ငင်းပါ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမှာပါ။ အခု လက်ရှိမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ bit coin ဟာ Internet Currency ကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Netflix ဒါမှမဟုတ် iTunes နဲ့တူပြီး DIVX အသုံးပြုသူတွေကို Movies ငှားရမ်းခပေးဆောင်ရပါတယ်။ ၂ ရက်တွင်း အပျက်အစီးအတွက် ခွင့်ပြုပေးထားပါ။ အဲဒီနောက် ငှားရမ်းရှောင်ရှားမှုတွေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အတွက် ၁၉၉၈ ခုနှစ် မှာ စီးပွားရေးအရှုံးပေါ်ပြီး DVD Format တွေဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်လာပါတယ်။
11.The table PC
iPad ရဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ Tablet PC ဟာ Touch Screen ပါဝင်ပြီး ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ Screen ကို လှည့်လို့ရပါတယ်။ Desktop PC အပါအဝင် ထုတ်ကုန်အတော်များများ ရဲ့ ဦးဆောင် တီထွင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သင်ထည့်ထားတဲ့ နွားနို့ဟာ နည်းနေပြီဆို အပြည့်ပြန်ထားဖို့ သာယာနာပျော်ဖွယ်အသံနဲ့ အချက်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ စနစ်ကြောင့် နွားနို့တွေ အချဉ်ဖောက် ပျက်စီးကုန်လို့ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Lifestyle တွေအတွက် ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကနဦး Gadget တစ်ခု လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ESPN က သူ့ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ဖုန်းကို ရောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အားကစားအကြောင်းတွေ ဖုန်းက ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါ စရိတ်စကကြီးခြင်းအတွက် ပိတ်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ခေတ်မှာကတော့ mobile banking လုပ်နိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်လာခဲ့ပေမယ့် Mobile ESPN ကတော့ အိုင်ဒီယာ တောေ်တာ့်ကို စောလွန်းသွားပါတယ်။
14.Nokia N – Gage
Aka taco ဖုန်းက အသုံးပြုသူတွေ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ ဘေးကပြောပြပေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ အသံသွင်းအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ၂ နှစ် အကြာမှာ ရပ်စဲသွားခဲ့ပါတယ်။